Niezaka nandiso iny filazana iny ireo tompon’andraikitra amin’ireo orinasa mpisehatra amin’izy io taorian’ireny toe-draharaha nivaivay toy ny tany Soamahamanina ireny. Nanazava tamin’izay fotoana izay ry zareo avy eo anivon’ny orinasa Ambatovy fa ankoatra ireo fotodrafitrasa apetrak’ilay orinasa mpitrandraka ao amin’ilay toeram-pitrandrahana dia 42 eo ho eo ihany koa ny hetra alain’ny fanjakana amin’ireo orinasa mpitrandraka rehetra na teratany na vahiny. Efa tamin’ny faran’ny herinandro teo ihany koa no fantatra fa na dia hatramin’ireo injeniera manampahaizana manokana momba ny fitrandrahana harena ankibon’ny tany aza dia miaiky fa tsy ampy ny fifaneraserana eo amin’ireo mpisehatra amin’ity fitrandrahana ity sy ny minisitera tompon’andraikitra na ny mpitondra.
Zava-dehibe amin’ny fampandrosoana
Zava-dehibe amin’ny fampandrosoam-pirenena nefa, hoy izy ireo, ny fahalavorarian’io. Na dia efa nanao ezaka aza ny avy eo anivon’ny minisitera, raha ny filazany, tamin’ny fametrahana birao misahana ny fandraharahana eo amin’izy ity tany amin’ireo faritra heverina ho mila izany, toa an’i Manakara sy Ambatondrazaka, dia hita fa mbola misy lesoka ihany ka mahatonga fitrandrahana tsy ara-dalàna matetika. Mitovitovy amin’izay ihany koa ny zava-mitranga eo amin’ny resaka fitrandrahana harena any amorontsiraka satria raha ny fanazavan’ny komitim-pirenena misahana ny morontsiraka dia tsy mbola laharam-pahamehana ny fitrandrahana harena voajanahary any amin’ireo morontsirantsika na dia any aza no itoeran’ny 65%-n’izany harena izany. Tsy mbola tafiditra ao anatin’ny fototry ny fampandrosoana eto amintsika izay fitrandrahana ny morontsiraka izay sady tsy mbola misy ihany koa ny fitrandrahana ireo harena samihafa ka dia manao izay saim-pantany ihany koa ireo mpitrandraka. Nomarihin’ity komity ity moa fa ny morontsiraka no be mponina indrindra eto amintsika.